घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? …हामी पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ त ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? …हामी पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ त ???
फोर जी’को जमनामा ब्रत बसेर भर्जिन पत्नि पाइन्छ भनेर कोही भगवान आएर मेरो कानमा सुनाए भने राम–राम म एक महिनासम्म पानी पनि नपिइ ब्रत बस्ने थिएँ ।’एकजना युवकको यो स्टाटस पढेर मनमा धेरै कुरा उम्रिए । दिमागमा कुरा खेलेपछि कलमको साहारा लिन बाध्य भएँ ।
परिवर्तनको खाका बोकेर जतिसुकै आधुनिकताको गीत गाए पनि महिलालाई हेर्ने पुरुषको सोच निच नै छ भन्ने कुराको पुष्टि सामाजिक संजालमा देखिने यस्तै कमेन्ट र स्टाटसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
दुख लाग्छ, महिला जतिसुकै शिक्षित भए पनि, समृद्ध भए पनि पुरुषहरुले महिलालाई हेर्ने आँखा नै ‘सेक्सिस्ट’ बनिदिएपछि परिवर्तन सम्भव छैन । ती पुरुष साथीको स्टाटसमै केन्द्रित बनौँ, पुरुष भर्जिन श्रीमति खोज्छन् ।
यही निच चिन्तनका कारण पुरुषप्रति महिला सधैँ सशंकित रहन्छन् । उनी त नेपाली समाजका पुरुषहरुका प्रतिनिधि पात्र हुन् । भर्जिन युवति खोज्ने पुरुषहरु नै धेरै वेश्यालय धाउँछन् ।
किनकी, श्रमितिमा भर्जि्निटी खोज्नु आफैँमा कुण्ठा र ढोंग हो । सामाजिक संजालमा दैनिक रुपमा सार्वजनिक भइरहने यस्तै प्रतिक्रियाले महिला–पुरुषको दूरी बढाउनुका साथै समाजलाई असहिष्णु बनाउँदै लैजान्छ ।
तर महिलालाई सम्मान गर्न नजान्ने ‘सेक्सिस्ट’ पुरुषहरु यस्ता गम्भीर विषयमा कहिल्यै उदार भएर सघन बहस गर्दैनन् । बरु कुण्ठा र ढोंगले भरिएका बिचार फेसवुकमा पोख्छन् ।
पुरुषले झैँ कुनै युवतिले पनि आफ्नो श्रीमान विहेअघि भर्जिन होस् भन्ने सर्त राखी भने के हुन्छ ? भर्जि्निटीबारे पुरुष जे सोच्छन् त्यो सोच नै निकृष्ट लाग्छ । अत्याधुनिक दुनियामा भर्जि्निटीबारे सोच बनाउने कुरामा सबै उदार बन्नैपर्छ ।
ति पुरुषलाई सोध्नुछ, ‘ओ सेक्सिस्ट पुरुष ! तिमीले विहेको लागि भर्जिन युवति खोजे झैँ, म पनि भर्जिन पुरुष खोजौँ ?’ के जवाफ दिन्छौ यस्तो सोध्दा ?
तर यस्तो सस्तो कुरामा बिचार अल्झाउनु छैन मलाई । प्रेम, यौन, विवाह जस्ता प्रकृतिक र सांस्कृतिक पक्षहरुबारे अलि फराकिलो दायरा बनाएर हेर्नुपर्छ । पक्कै पनि समाज बदलिँदैछ ।
यस्ता विषयमा हेरिने दृष्टिकोण फेरिएको अवस्य छ । यद्यपी कुण्ठाले भरिएका ‘सेक्सिस्ट’ पुरुषहरुको सोचले गर्दा पुरुषसत्तालाई थप मलजल पुर्याएको तितो यथार्थ अझै छ । – नयाबाटो डट कमबाट